Maxaabiista kooxda la baxday dowladda islaamka ee aysan cidna rabin - BBC News Somali
Maxaabiista kooxda la baxday dowladda islaamka ee aysan cidna rabin
10 Oktoobar 2019
Image caption Dagalyahanno looga shakisan yahay IS ee lagu qabtay Suuriya horraantii sanadkan
Iyada o ay Mareykanka ciidamadooda ka soo saareen waqooyi bari Suriya islamarkana kuwa Turkiga ay gudaha u galeen, waxaa su'aalo la iska waydiinayaa halka ay ku dambeyn doonan kumannaan maxabiis ah oo horey uga tirsanaa kooxda IS.
Maxaabiistan iyo qoysaskooda ayaa waxaa gacanta ku haya xoogaga ay hogaamiyaan kurdiyiinta ,waxaana maxabista ka mid ah dad ka soo kala jeeda dalal kala duwan.
Mareykanka ayaa ugu baaqay wadamada caalamka in muwaadiniintoda ay halkaasi ka soo qaadan oo ay dalalkooda dib ugu soo celiyaan.
Madaxwayne Trump ayaa dalalka Yurub ku eedeeyay in ay arrintan ku guuldareysteen.
Hadaba waa imisa tirada maxabiista ajaaniibta ah ee ay hayan Kurdiyiinta,mase jiraa dal doonaya in uu muwaadiniintiisa soo ceshado?
Maxaabiista kooxda la baxday dowladda Islaamka ayaa waxaa lagu hayaa dhowr xero oo ku yaalla waqooyiga Suuriya.
Tirada ugu badan waxaa lagu hayaa xerada al-Hol, oo ay ku jiraan70,000 oo qof islamarkana 90% waa haween iyo caruur.
11,000 oo ka mid ah dadka xeradaasi lagu hayo waa dad ajnabi ah.
Waxaa sidoo klae jira 12,000 oo looga shakisan yahay IS oo lagu hayo 7 xabsi oo ku yaalla waqooyi bari Suuriya islamarkana 4,000 oo ka mid ah waa ajaaniib sida ay sheegeen kooxaha xuquuda aadnaha taasi oo ay micnaheedu tahay in aysan ka soo jeedin Suuriya iyo Ciraaq midkoodna.
2,000 ayaa ka soo kala jeeda 50 dal oo kala duwan.
Caro ka dhalatay nin Israa'iili ah oo isku soo sawiray masjika nebiga
Qabiilka ugu tirada yar adduunka oo dilay nin Maraykan ah
Ku dhawaa 800 oo tiradan ka mid ah waxay ka soo jeedaan dalalka Yurub halka inta kale ay ka soo jeedaan dalalka bariga dhexe,waqooyiga Afrika iyo Eeshiya.
Daraasad uu sameeyay machadka barashada xagjirnimada ee King's College's International Centre for the Study of Radicalisation ayaa lagu ogaaday in 41,000 oo ajaaniib ah ay ku biireen kooxda IS ee Ciraaq iyo Suuriya intii u dhaxeysay bilihii April iyo June ee 2018.
Ma jiraa dal muwaadiniintiisa dib ula soo laabtay?
Qaramada Midoobey ayaa sheegtay in dalalka ay muwaadiniintan ay ka soo jeedaan ay qaataan masuuliyada muwaadiniintooda islamarkana ay dalkooda dib ugu soo celiyaan haddii aan dacwad lagu soo oogin.
Dalal badan ayaa ka cagajiidayay in ay arrintaa sameeyaan,iyaga oo ka cabsi qaba dhibaato dhanka sharciga ah ay kala kulmaan la tacalida muwaadiniintooda ku biiray IS.
Balse dalalka qaar ayaa dib dalalkooda ugu celiyay tira yar oo ka mid ah muwaadinintooda.
Waxaa ka mid ah dalalkaasi
Fransiiska: 18 caruur ah
Mareykanka: 16 caruur iyo dad waaweyn isugu jira
Jarmalka: wax ka yar 10 qof
Australia: 8 caruur ah
Sweden: 7 caruur ah
Norway: 5 caruur ah
Maxaabiista ajaaniibta ah qaar ayaa waxaa loo wareejiyay Ciraaq islamarkana waxaa lagu maxkamadeeyay maxkamadaha dalkaasi.
Qaar ka mid ah dalalka ay muwaadiniintan ay ka so jeedaan ayaa waxaa lagala noqday dhalashada si looga hortago in ay soo laabtan.
Waxaa ka mid ah dadkaasi Shamima Begum oo u dhashay Britain oo dhalashada lagala laabtay.